Ugu yaraan 22 qof oo rayid ah ayaa la dilay
Ugu yaraan 22 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar ay koox fallaago ah ku qaadeen tuulo ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ee Woqooyiga Kivu, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah.
Weerarka ka dhacay tuulada Mwenda ee gobolka Beni ayaa waxaa fuliyay isbahaysiga mucaaradka ee Uganda ee loo soo gaabiyo ADF, Donat Kibwana, maareeyaha deegaanka Beni ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Anadolu.
“Mucaaradka ADF waxay weerareen tuulada Mwenda Isniintii abaaro 19:00 GMT, halkaas oo ay ku dileen 22 qof oo rayid ah baangado.” ayuu yiri Kibwana, isaga oo intaa ku daray in tirada dhimashadu ay intaas ka badan karto.
Hogaamiyaasha maxalliga ah Ruwenzori Bozy Sindiwako iyo Iteni Muvunga Kimwele ayaa wakaalada wararka ee DPA khadka taleefanka ugu sheegay Talaadadii in fallaagada ay adeegsadeen baangado iyo gawaarida gaashaaman ee gaashaaman si ay u fuliyaan xasuuqa isla markaana ay si nidaamsan u bililiqeysteen dejinta.
Fulbert Kasairo, oo ah sarkaal maxalli ah, ayaa sheegay in daraasiin kale oo tuulo ah ay sidoo kale afduubeen kooxdii weerarka soo qaaday si ay alaabooyin la xaday ugu qaadaan meelo kale.
Ciidanka ayaa soo farageliyay goor dambe si ay dib ugu riixaan fallaagada, Bozy Sindiwako iyo Muvunga Kimwele ayaa sidaas yidhi.
Dilalkan soo noqnoqday… waxay sababayaan barokac aad u ballaaran oo dad ah oo ku jira qaybtan [aagag] ammaan ah, oo ay ku jiraan, gaar ahaan Beni, ”ayuu yiri Bozy Sindiwako.
Lieutenant Antony Mwalushayi oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo (FARDC) ayaa xaqiijiyay weerarka isagoo aan bixin faahfaahin.
ADF, oo asal ahaan kasoo jeeda waqooyi-bari Ugandha 1990-yadii, waxay weerar iyo dil ku haysay dad rayid ah bariga DRC muddo tobanaan sano ah.
Ka faa’iideysiga sharci darada ah ee kheyraadka dabiiciga ah ayaa wali sabab u ah isku dhaca bariga dalka sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Inta badan kooxaha maleeshiyada ayaa dhinac iska dhigay dalabyadooda siyaasadeed waxayna ku lug leeyihiin ganacsiga macdanta.
Unpleasant Facet Results of Consuming Espresso Each Day,
8 Ideally suited Immune-Boosting Dietary supplements That Paintings, Say